Oovimba beMoneyGram-Funda ukurhweba
I-Moneygram Ibhengeza uTyalo-mali oluCwangcisiweyo kwi-Coinme-Iziqhayisa ngamathuba amatsha e-Crypto
Inkampani yeentlawulo zeBehemoth iMoneygram International Inc. ibhengeze izolo ukuba "Ugqibe utyalo-mali olucwangcisiweyo oluncinci kwiCoinme, utshintshiselwano lwemali ye-cryptocurrency ehamba phambili e-US" Olu tyalo-mali lunika inkampani yeentlawulo malunga ne-4% yobunini kwi-Coinme. Ethetha ngophuhliso lwamva nje, usihlalo kunye ne-CEO yeMoneygram, u-Alex Holmes, uqaphele ukuba:
"KwiMoneygram, siqhubeleka ukubamba kumathuba amakhulu akhoyo kwihlabathi elihlala likhula le-cryptocurrency kunye nokukwazi kwethu ukusebenza njengebhulorho ethobelayo yokudibanisa i-asethi yedijithali kwimali yasekhaya."
Utyalo-mali lwe-Moneygram luya kuvumela inkampani ye-crypto ukuba yandise imisebenzi yayo ngaphandle-kwamanye amazwe-kwaye iqhube amanye amanyathelo okukhula.
Isekwe kwi-2014 e-US, i-Coinme ngoku iqhuba imisebenzi kumazwe angama-48 eMelika kwaye iceba ukuthatha iinkonzo zayo phesheya kwezilwandle kungekudala. Inkampani ye-crypto ngaphambili ibisebenzisana noCoinstar, umboneleli weenkonzo ze-crypto ezizenzekelayo ezijolise ekuguquleni iingqekembe zabo ze-fiat zibe yimali yephepha, ukuxhasa ukuthengwa kweBitcoin ngaphezu kwe-21,000 ye-Coinstar kiosks. Ngesiseko sabathengi malunga ne-150 yezigidi zabantu, ukufunyanwa kwe-Moneygram's Coinme kunokomeleza kakhulu ukubambisana kweCoinme kunye ne-Coinstar.
IMoneygram kunye neCoinme Babelana ngombono ofanayo
Ngokwesaziso esisemthethweni, Moneygram kunye ne-Coinme share a "Umbono wokwandisa ukufikelela kwii-asethi zedijithali kunye ne-cryptocurrencies." I-CEO yeMoneygram nayo ichaze ukuba:
“Njengoko sikhawulezisa iinzame zethu zokuqalisa izinto ezintsha, intsebenziswano kunye nabaqalayo abafana noCoinme iya kuqhubela phambili isikhundla sethu njengenkokeli yoshishino ekusetyenzisweni kwe-blockchain kunye nobuchwepheshe obufanayo.
Umnikelo wethu okhethekileyo we-cash-to-bitcoin kunye neCoinme, ebhengezwe ngoMeyi ka-2021, ivule ishishini lethu kwicandelo elitsha ngokupheleleyo labathengi, kwaye khange sonwabe ngakumbi inkqubela yethu.
Ngaphaya koko, isigebenga seentlawulo sabhengezwa ngoMeyi kulo nyaka uphelileyo ukuba zombini iinkampani zicwangcisa "ukwenza imodeli ye-crypto-to-cash ngokwakha ibhulorho yokudibanisa i-bitcoin kwimali ye-fiat yendawo." Intsebenziswano entsha iya kuvumela abathengi beMoneygram ukuba bafikelele kwiindawo zokurhweba zeBitcoin kwiindawo ezingaphezu kwe-12,000.
tags ICINME, Cryptocurrency, MoneyGram, iindaba
IMoneygram ibhengeza ubuDlelwane neStellar ukuphucula intengiselwano yemali
Ukuhlaziywa: 8 October 2021
Intlawulo esekwe eTexas kunye nenkampani yokuthumela imali iMoneygram kutsha nje ibhengeze ubuhlakani bobuchule kunye neStellar Development Foundation-uphuhliso kunye nokukhula kweStellar (XLM) blockchain-ukuyivumela ukuba ingene kwintlawulo yeStellar kunye nokukwazi ukuhlawula. Inkampani yentlawulo iza kusebenzisa i-USDC yemveli (i-USD Coin) kwi-Stellar blockchain ukuququzelela ukuhanjiswa kwemali ngaphandle koxinzelelo.
Ngenxa yokuba iMonegram okanye isangqa (inkampani yokubamba ye-USDC) ingezizo iibhanki, i-United Texas Bank iyakusebenza njengendawo yokuhlala phakathi kwala maziko mabini.
Inkampani yentengiso yamazwe aphesheya ngoku isebenza njenge-off-ramp kubasebenzisi be-USDC ukufumana iimali ze-fiat kunye ne-vice-versa, ukuzisa ixabiso ngakumbi kwi-USDC ecosystem.
I-Moneygram iyaqhubeka nokubonisa ukuzinikela kwayo ekwamkeleni ubuchwepheshe obutsha ukuphucula iinkonzo zayo. Iziko elisekwe eTexas yayiyenye yeenkampani ezithunyelwa nguvulindlela zokudibanisa i-blockchain emva kokubambisana kwayo kwasekuqaleni neRipple. Nangona kunjalo, kuye kwafuneka kuqhawulwe ubudlelwane neRipple Labs emva kokubhengezwa kwamanyathelo asemthethweni yi-SEC ngoDisemba 2020.
I-Moneygram isebenza ngokuhambelana neeNjongo zoPhuhliso eziZinzileyo ze-UN
Inkqubo ecetywayo yinkampani kufuneka ivumele ukuhlaliswa kwangoko kwimirhumo ephantsi kakhulu ngenxa ye-Stellar blockchain-effect, kwaye akukho kungazinziswa okuchaziweyo ngenxa yokusebenzisa i-USDC, i-solidcoin. Ethetha ngophuhliso lwamva nje, u-CEO weMoneygram u-Alex Holmes uqaphele ukuba:
"Njengokuba i-crypto kunye ne-digital currencies iphakama, sinethemba ngakumbi malunga nokubakho kwemali ezinzileyo njengeyona ndlela yokuhlawula iintlawulo ezinqamlezayo ... sime kakuhle kakhulu ukuba siqhubeke ukuba yinkokheli ekwakheni iibhlorho zokudibanisa iimali zedijithali kunye Iimali zemali zasekhaya. ”
Kukhululo olusemthethweni, isekethe yaqinisekisa ukuba obu budlelwane kufuneka bucuthe iindleko ezinxulumene nentlawulo. Le njongo ihambelana nenye yeeNjongo zoPhuhliso oluZinzileyo zeZizwe eziManyeneyo, ezijolise ekwehliseni iindleko zokuthumela imali ukusuka kwi-7% ukuya kwi-3% yemali ethunyelweyo.
tags Cryptocurrency, MoneyGram, iindaba, Stellar, USDC
I-MoneyGram isungula iNkonzo eNtsha yokuThengisa imali yeBitcoin yabathengi baseMelika
Ukuhlaziywa: 12 May 2021
MoneyGram kunye neCoinme, utshintshiselwano olunelayisensi lokusebenzisa imali e-US, kutshanje libhengeze “Ukumiliselwa kobambiswano olutsha ukwenza inkxaso-mali ezinkozo kunye nokuhlawulwa kokuthengwa kwemali yedijithali kunye nentengiso."
I-MoneyGram yenye yeentlawulo eziphambili ze-P2P ezihamba phambili kunye nokudluliselwa kwemali, okwangoku elungiselela ngaphezulu kwe-150 yezigidi zabathengi kwihlabathi liphela.
I-Coinme yi-US-based cryptocurrency exchange kunye nomqhubi weATM onendawo ezingaphezu kwama-20,000 XNUMX zokuthengisa iBitcoin ngemali ngokusebenzisana neCoinstar neMoneyGram.
Kwisibhengezo esisemthethweni, iinkampani ziqaphele ukuba intsebenziswano "Izakuzisa i-bitcoin kumawakawaka eendawo ezithengisa indawo e-US, ngezicwangciso zokwandisa ukukhetha iimarike zamanye amazwe kwisiqingatha sesibini sowe-2021.Ingxelo yongeze ngelithi inkonzo entsha izakuqala "Imali ekhoyo kwihlabathi kunye neendlela ezingahambelaniyo kunye nokuqinisekisa ukufikelela kwiBitcoin."
Isibhengezo sichaze ukuba:
"Umdibaniso weMoneygram kunye neCoinme uza kubonelela ngendlela ekhawulezayo nelula kubathengi ukuba bathenge i-bitcoin ngemali ezinkozo kwaye barhoxise ukubanjwa kwemali ezinkozo."
I-MoneyGram isika umda kwiNkonzo ye-Crypto eya e-US ngoku
Ngokwengxelo, kuphela ziivenkile ezikhethiweyo zeMoneyGram e-US ezinokubonelela ngenkonzo entsha ye-crypto xa isungulwa kwiiveki ezimbalwa.
Nangona kunjalo, iinkampani ezisebenzisanayo ziya kwenza ukuba inkonzo ifumaneke kwezinye iindawo zehlabathi ngokukhetha i-crypto kungekudala emva kokumiliselwa e-US.
Ngokwolwazi olukuwebhusayithi yeCoinme, inkonzo yile "Ifumaneka kwiindawo eziyi-12,000 zeMoneygram."
Iinkampani ziveze ukuba inkonzo ye-crypto “Yenzelwe ngokukodwa abathengi abanokuba nomdla ekusebenziseni i-bitcoin okokuqala ngqa."
Ukuthetha ngalo mbandela, i-CEO yeMoneyGram, u-Alex Holmes, uqaphele ukuba:
"Olu manyano lutsha luvula ishishini lethu kwicandelo elitsha labathengi njengoko singabokuqala ukuba ngoovulindlela bemodeli ye-crypto-to-cash ngokwakha ibhulorho neCoinme yokuqhagamshela i-bitcoin kwimali ye-fiat yalapha."
tags Bitcoin, ICINME, MoneyGram, iindaba
I-Moneygram Severs Ties kunye ne-Ripple phakathi kwe-SEC ye-Saga
Ukuhlaziywa: 23 Februwari 2021
I-Moneygram International ibhengeze izolo ukuba iphelise ukusebenza kwiqonga likaRipple. Ezi ndaba zeza nengxelo yenkqubela phambili yeQ4 kunye ne2020 yenkampani.
Ngokwembonakalo yekota yokuqala ka-2021, iMoneygram iqaphele ukuba "Ayicwangcisi nasiphi na isibonelelo kwimali yophuhliso lwemarike kwikota yokuqala," ukongeza oko "Ngenxa yokungaqiniseki malunga nokuqhubeka kwesimangalo kunye ne-SEC, inkampani iyekise urhwebo kwiqonga likaRipple."
Ngaphambi koku, inkampani yesisombululo sokuhlawula yayinesivumelwano sentengiso kunye neRipple, eyamiselwa ngoJuni 2019, ukuya "Sebenzisa i-Ripple's exchange exchange (FX) blockchain yokuthengisa iqonga (ODL) ukuthenga okanye ukuthengisa imali ezine."
Kwingxelo yakhe yomvuzo ngoMvulo, iMoneygram ichaze oko "Kwikota yokuqala yowama-2020, inkampani ifumene isibonelelo seendleko ezizizigidi ezili-12.1 zeedola kwimali yophuhliso lweemarike zeRipple." Inkampani ikwaphawule ukuba kwi-Q4 ye-2020, yavelisa "Izigidi ezingama-8.5 yezigidi zeedola ezivela kwimali yophuhliso lwemarike yeRipple ye- $ 9.2 yezigidi, isuswe kwintengiselwano kunye neendleko zokurhweba ze- $ 0.7 yezigidi."
Ngaphaya koko, ingxelo yayo yemali yeminyaka ye-2020 kunye ne-2019 ibandakanya iifizi zokuphuhliswa kwemarike yeRipple ye- $ 50.2 yezigidi kunye ne- $ 11.3 yezigidi ngokwahlukeneyo. La manani achasene nentengiselwano ehambelana noko kunye neendleko zokurhweba ze- $ 11.9 yezigidi kunye ne- $ 0.4 yezigidi ngokwahlukeneyo.
Umthetho we-SEC ngokuchasene neRipple
I-Moneygram ikhankanye ityala le-SEC lakutshanje malunga neRipple Labs Inc. njengesizathu sokuhamba kwayo.
Umgwebo we-SEC, owafakwa ngoDisemba 2020, uhlawulisa i-CEO ye-Ripple kunye nomseki-mbambisene ngokuqhuba ukhuseleko olungabhaliswanga lwe-1.3 yezigidigidi XRP.
Ityala lityhola oko Ubuninzi bokukhwela kwi-ODL yayingeyiyo eyendalo okanye eqhutywa yimarike. Endaweni yoko, yaxhaswa nguRipple. ” I-SEC yongeze ukuba "Nangona iRipple ichukumisa i-ODL njengenye yeendlela ezingabizi kakhulu kwimizila yeentlawulo zemveli, ubuncinci umthumeli wemali… uyifumene ibiza kakhulu kwaye ngenxa yoko ayiyiyo imveliso ebenqwenela ukuyisebenzisa ngaphandle kwembuyekezo ebalulekileyo evela eRipple."
tags MoneyGram, Ripples, sec
Ukuthengiselana kweXRP kungqina i-Insane Spike ngaphakathi nje kweveki
Ukuhlaziywa: 31 October 2019
Intengiselwano yemihla ngemihla yeXRP ithathe nje umtsi omtsha. I-cryptocurrency ngoku ine-1.7 yezigidi zemicimbi yemihla ngemihla, ebhalwe njengamaxesha onke aphezulu.
Kwingxelo ye-cryptocurrency tracker yedatha, i-BitInfoCharts, ngaphezulu kancinci kwe-50% yazo zonke iintengiselwano ze-imali yedatha kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo yayiyintengiselwano yeXRP. I-Ether (ETH) kunye neBitcoin (BTC) iza kwindawo yesibini neyesithathu ngokwahlukeneyo.
Ukuthengiselana kweXRP akufikanga kubude obunjalo ukusukela nge2017, xa indawo ye-cryptocurrency yayixhonywe kukukhanya kwenkunzi yenkomo eyimbali ngoDisemba 2017.
Kwiveki ephelileyo (nge-21 ka-Okthobha), i-XRP yayiququzelela ukuthengiselana kancinci ngaphezulu kwe-730,000 mihla le, ikhawulezisa ukuya kwiintsuku ezisi-8 kamva kwaye isigebenga semali ye-cryptocurrency sasifumana ukuthengiselana kwezigidi eziyi-1.6 ngosuku olonyuka ngaphezulu kwe-100% kwicandelo yeentsuku eziyi-8. I-XRP inqwenela ukuphakama okutsha kwintengiselwano yemihla ngemihla ukusukela oko kumnandi.
Yintoni Enokuba Inokukhuthaza Ukwanda Kwabantu?
Akusaqiniseki ukuba yintoni ebangela oku kunyuka kwintengiselwano yemihla ngemihla, kodwa eyona nto uyikholelwayo kukuba izithintelo zokucinga ziya kuzalisa indawo. Ukucinga ukuba yintoni enokuba noxanduva kule rally inokuba sisiganeko seSwell esiza kubanjwa yiRipple ngoNovemba. Olunye uqikelelo inokuba ngumanyano olutsha phakathi kweRipple neMoneygram esekwe ekufumaneni iindlela ezintsha zokusebenzisa iXRP. Nokuba yeyiphi na imeko, iyacaca ukuba kukho into ebalulekileyo eqhubekayo ngasemva njengoko iRipple isecicini lokufezekisa ukuthengiselana kwezigidi eziyi-1.7 mihla le.
Ngexesha lokubhala, i-XRP ithengisa nge-0.300 yeedola emva kokufumana i-1.6% kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo. Amanqanaba aphakamileyo evekini abonwa kwi-0.3153 yeedola ngomhla wama-26 ku-Okthobha ngelixa eyona ndawo iphantsi yayiyi- $ 0.261 neyangqinelwa ngomhla wama-23 kule nyanga.
I-Ripple ichaza izicwangciso zokujoyina iqela elitsha
URipple uxele ukuba uceba ukujoyina umbutho weBlockchain. Ubulungu bukaRipple kweli qela buza kudala ukufikelela kumaziko olawulo kunye nabaphembeleli becandelo kwinkampani. Iqela ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo obandakanya abaxhasi be-blockchain kwaye ujonge ukukhuthaza ukwamkelwa kwe-blockchain emhlabeni.
tags block Chain, Cryptocurrency, MoneyGram, I-Ripple XRP